Ihe nzacha akpa azụ maka akwarium: ụdị kachasị arụ ọrụ na agbachi nkịtị | Nke azụ
Natalia Cerezo | 06/09/2021 14:42 | Ngwa
Ihe nzacha akpa azụ bụ ezigbo nhọrọ maka akwarium, nnukwu ma ọ bụ obere, na ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na -akụ mmiri na azụ azụ ma ọ bụ nwee ahụmịhe dị ukwuu. Ha bụ ngwaọrụ zuru oke nke na -enyekarị ụdị nzacha atọ, na mgbakwunye na atụmatụ ndị ọzọ na -atọ ụtọ.
N'isiokwu a, anyị ga -ekwu maka ihe nzacha akpa akpa dị iche iche, ihe ha bụ, otu esi ahọrọ ha yana ụdị ụdị kacha mma. Ma, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na isiokwu a ma chọọ ịkọwa onwe gị nke ọma, anyị na -akwado ka ị gụọ akụkọ ọzọ gbasara ya nzacha aquarium.
1 Ihe nzacha akpa azụ kacha mma maka akwarium
2 Kedu ihe nzacha azu paaki
3 Uru na ọghọm nke ụdị nzacha a
4 Ụdị nzacha akpa akpa kacha mma
5 Otu esi ahọrọ nzacha akpa azụ maka akwarium anyị
5.1 Azụ aquarium
5.2 Njirimara nke akwarium
5.3 Ụdị akwarium
6 Kedu ihe nzacha akpa akpa kacha dị jụụ?
7 Ị nwere ike itinye ihe nzacha akpa azụ n'ime nnukwu azụ?
Ihe nzacha akpa azụ kacha mma maka akwarium
Fluval Myọcha C2
Akpa akpa AstroAqua ...
BPS (Nchọpụta Ọkachamara R ...
SunSun CBG-500 Myọcha ...
Marina Myọcha ebughibu 10, 1 ...
Kedu ihe nzacha azu paaki
Ihe nzacha azụ bụ otu n'ime ụdị nzacha akwarium kachasị ewu ewu. Dị ka aha ahụ na -egosi, ha na -akwụgide n'otu akụkụ nke akwarium, dị ka akpa azu. Ọrụ ya dị nfe, ebe ọ bụ na ha na -amị mmiri ma na -agafe ya na nzacha ha tupu ịdọrọ ya, dị ka a ga -asị na ọ bụ nsụda mmiri, laghachi na tank azụ, dịlarị ọcha na enweghị ntụpọ.
Akpa akpa Ha na -agụnyekarị ụdị nzacha atọ ndị na -ahụ maka ịme nzacha nkịtị nke aquariums chọrọ. N'ime nzacha n'igwe, nke mbụ mmiri na -agafe, ihe nzacha na -ewepu nsị kachasị ukwuu. Na nzacha kemịkalụ, a na -ewepụ obere irighiri ihe. N'ikpeazụ, na nzacha ihe ọmụmụ, a na -emepụta ọdịbendị nje na -agbanwe ihe ndị na -emerụ azụ ka ọ bụrụ nke na -adịghị emerụ ahụ.
Uru na ọghọm nke ụdị nzacha a
Akpa akpa azụ nwere ọtụtụ uru na ọghọm nke ahụ nwere ike ịba uru mgbe ị na -ahọrọ ma ị ga -enweta nzacha ụdị a ma ọ bụ na ị gaghị enweta.
Ụdị nzacha a nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke uru, ọkachasị gbasara ntụgharị ya, nke na -eme ka ọ bụrụ ihe zuru oke maka onye mbido ọ bụla:
Ha bụ ngwaahịa zuru oke yana nnukwu mgbanwe nke na -agụnyekarị ụdị nzacha atọ nke anyị kwurula (igwe, kemịkal na ndu).
Ha na -enwekarị inwe Edozi ego.
Ha dị oke dị mfe ịchịkọta na ijiỌ bụ ya mere a na -atụ aro ha nke ukwuu maka ndị mbido.
Anọla ohere n'ime akwarium.
N'ikpeazụ, na -adịkarị mmezi ya adịghị oke ọnụ (n'usoro oge, karịa ma ọ bụ ihe na -erughị izu abụọ dabere na ike na unyi na -agbakọta na akwarium, yana ego).
Agbanyeghị, ụdị nzacha a nwekwara nwere ụfọdụ mwepu, karịsịa metụtara ụdị nke na -eyighị ka ọ na -anabata ya yana ndị ọzọ:
Ụdị nzacha a A naghị akwado ha maka akwarium nwere ahịhịa, n'ihi na ha nwere ike ịckụ ha.
Nye ndị azụ betta adịghịkwa anụ ọkụ n'obidị ka nzacha na -ebute mmiri nke ọ na -esiri ha ike igwu mmiri.
El chemical nyo ọ na -adịkarịghị mma nke ukwuu ma ọ bụ, opekata mpe, ọ naghị enye ezigbo nsonaazụ dịka abụọ ndị ọzọ.
N'otu aka ahụ, azu paaki na -enyocha mgbe ụfọdụ ha na -adịchaghị iken'ihi na ha nwere ike ịtụgharị mmiri ha sere ugbu a.
Ụdị nzacha akpa akpa kacha mma
N'ahịa anyị nwere ike ịchọta ụdị eze nwanyị atọ mgbe ọ na -abịa nzacha akpa azụ nke ga -ahụ maka inyocha mmiri n'ime akwarium gị ruo mgbe ọ dị ka ụgbọ elu ọla edo.
Anyị ekwuworị banyere Ihe nzacha AquaClear na nso nso a. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ akara kacha atụ aro site n'aka ndị ọkachamara na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri novice. Agbanyeghị na ọ pụtara na ọ nwere ọnụ ahịa dị elu karịa ndị ọzọ, ịdị mma nke ngwaahịa ya enweghị mgbagha. A na -ekewa ihe nzacha ya dị ka ike dị na lita mmiri dị na akwarium gị. Na mgbakwunye, ha na -erekwa akụkụ ahụ maka ihe nzacha (sponges, unyi ...).
Ihe nzacha nke ika a ha nwere ike rụọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ yana ụbọchị mbụ. Naanị ihe ị ga -eme bụ imezi ka injin ya ghara ịgba ọkụ.
Eheim Myọcha Mpụga ...
Akara German nke ahụ kacha mma n'ichepụta ngwaahịa ndị metụtara mmiri, ma ọ bụ akwarium ma ọ bụ ubi. Ihe nzacha ya, ndị na -ehicha gravel, ndị na -akọwa ihe, ndị na -enye azụ ma ọ bụ ndị na -ekpo ọkụ aquarium pụtara ìhè. Ọ bụ akara na -atọ ụtọ nke na ọ bụghị naanị na -ere ngwaọrụ, kamakwa akụkụ rụrụ arụ na ibu maka nzacha ya.
N'ụzọ na -akpali mmasị, nfuli mmiri nke onye nrụpụta a, nke ezubere maka akwarium, na -adịkwa na -eji ọnọdụ kọmpụta na sava dị jụụ na -aga n'ihu, mkpọtụ dị ala na ụzọ dị mma.
Akpa akpa maka ...
Tidal bụ ika ọzọ dị oke mma nke anyị nwere ike ịzụta ihe nzacha akpa azụ maka akwarium anyị. Ọ bụ akụkụ nke Seachem, ụlọ nyocha dị na United States raara nye ngwaahịa kemịkalụ, dịka ọmụmaatụ, ihe mkpali, njikwa phosphate, ule amonia ..., n'agbanyeghị na ọ gụnyekwara nfuli mmiri ma ọ bụ ihe nzacha.
Ihe nzacha Tidal bụ ama ama maka ịnye atụmatụ anaghị etinye na ụdị ndị ọzọ nke nzacha, dịka ọmụmaatụ, ọkwa mmiri a na -agbanwe agbanwe ma ọ bụ ihe nhicha maka irighiri ihe na -agbakọta n'elu mmiri.
Otu esi ahọrọ nzacha akpa azụ maka akwarium anyị
Ịhọrọ nzacha akpa azụ nke na -egbo mkpa anyị na nke azụ anyị nwekwara ike bụrụ ihe ịma aka. Ọ bụ ya mere anyị ji enye gị nke a usoro ndụmọdụ iburu n'uche:
Dabere na azụ anyị nwere na akwarium, anyị ga -achọ otu ụdị nzacha ma ọ bụ ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, dịka anyị kwuru, zere nzacha akpa azụ ma ọ bụrụ na ị nwere azụ ma ọ bụ azụ betta, ebe ọ bụ na ihe nzacha ndị a anaghị amasị ha. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere nnukwu azụ nke ruru unyi nke ukwuu, họrọ nzacha akpa azụ nke nwere nzacha igwe siri ike. N'ikpeazụ, ezigbo nzacha ihe dị ndụ dị na akwarium nwere ọtụtụ azụ, ebe ọ bụ na ọ bụghị ya, enwere ike mebie nguzozi siri ike nke gburugburu ebe obibi.
Akụkụ nke akwarium bụ dịkwa mkpa mgbe ị na -ahọrọ otu nzacha ma ọ bụ ọzọ. Ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa na, tupu ị na -ekpebi otu ụdị ma ọ bụ ọzọ, ị ga -agbakọọ ikike ikike akwarium gị nwere yana oke mmiri ị ga -achọ nzacha ka ọ rụọ kwa elekere iji mee ka ọ dị ọcha. Site n'ụzọ, ihe nzacha azu paaki dabara adaba maka obere akwarium na obere. N'ikpeazụ, ọ dịkwa mma iburu n'uche ebe ị ga -etinye akwarium ahụ, ebe ọ bụ na nzacha ahụ ga -achọ ntakịrị oghere na nsọtụ ya, yabụ ọ bara uru ilele nha ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ị nwere akwarium. megide mgbidi.
N'ezie ụdị akwarium abụghị nsogbu maka nzacha akpa azụ, n'ụzọ dị iche, kemgbe n'ihi ntụgharị ha, ha dabara nke ọma n'ime ụlọ ọ bụla. A na -atụ aro ha maka akwarium a kụrụ, ebe ọ bụ na tube nke ha ji amị mmiri dị mfe izo n'ime ahịhịa. Agbanyeghị, cheta na ụdị ihe nzacha ndị a na -eme ugbu a siri ezigbo ike.
Kedu ihe nzacha akpa akpa kacha dị jụụ?
Ọ dị oke mkpa ịhọrọ a gbachi nkịtị ma ọ bụrụ na ịchọghị imesi azụ gị ike… Ma ọ bụ ọbụna gị onwe gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na edobere akwarium n'ime ụlọ. N'echiche a, ụdị ndị kacha pụta ìhè maka ịnye nzacha dị jụụ bụ Eheim na AquaClear.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị ihe nzacha nwere ike wepụta mkpọtụ ma na -akpasu iwe ọbụlagodi na -emezighị emezi. Iji zere ya:
Nye engine oge ụfọdụ ka ọ dị mma. Ụbọchị ole na ole ka ewepụtara nzacha ọhụrụ, injin ahụ kwesịrị ịkwụsị ime oke mkpọtụ.
Lelee na okwute ma ọ bụ ihe fọdụrụ ka araparabeghị nke nwere ike ibute vibration.
I nwekwara ike tinye ihe n'etiti iko na nyo iji zere ịma jijiji.
Ọ bụrụ na ihe na -enye gị nsogbu bụ nsụda mmiri ahụ dị ọcha nke na -esi na nzacha apụta, gbalịsie ike idobe oke mmiri (ị ga -emezigharị ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ ọ bụla) ka ụda nsụda mmiri ahụ adịghị esi ike.
Ị nwere ike itinye ihe nzacha akpa azụ n'ime nnukwu azụ?
Agbanyeghị na enwere nzacha akpa a haziri maka akwarium nano, nke bụ eziokwu bụ na maka tank azụ na ihe nzacha ogbo anyị ga -ezu. Dịka anyị kwurula n'elu, ihe nzacha nsụda mmiri na -ebute oke ike nke nwere ike imetụta azụ anyị n'ụzọ na -adịghị mma ma ọ bụ gbuo ha, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ha bụ oporo ma ọ bụ azụ nwa.
Ọ bụ ya mere na ọ ka mma na anyị na -ahọrọ nhọrọ ihe nchacha sponge, ebe ọ nweghị mmiri mgbapụta nke nwere ike ilo azụ anyị na mberede, ihe nke ihe puru omume ya na -abawanye nke ukwuu n'obere oghere. Ihe nzacha sponge bụ kpọmkwem ihe aha ha na -egosi: ogbo nke na -enyocha mmiri na, mgbe ihe dị ka izu abụọ jiri ya, na -aghọkwa ihe nzacha ihe ọmụmụ, ebe ọ na -ejedebe na nje bacteria bara uru maka gburugburu ebe nchekwa azụ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere nnukwu azụ azụ nwere ihe nzacha moto, mana emere ya maka ebe nwere oke mmiri.
Anyị nwere olile anya na anyị enyerela gị aka ịghọta ụwa nke nzacha akpa akpa site n'isiokwu a. Gwa anyị, ị jirila ụdị nzacha akwarium a? Gịnị bụ ahụmịhe gị? Ị na -akwado otu ụdị ma ọ bụ ihe nlereanya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » Ihe nzacha akpa akpa akwarium